Tesco 2 Azụcha achịcha 280G | Nzipu ahia otu ubochi - Lewisham Tesco 2 Steak Bakes 280G– Ordrs
Osisi 2 Steak Achicha 280G
Achịcha achịcha puff na-etinye iberibe ibe anụ na grafe ihendori.
Maka ozi ndị ọzọ gbasara ọdịmma anyị na ụkpụrụ mma gaa na tescoplc.com
Jupụta na mpempe anụ anụ anụ na-acha uhie uhie na anụ.
Na Tesco, anyị nwere ndị ọrụ ugbo na-arụ ọrụ na ndị ọrụ ugbo na ndị na-ebubata ya iji meziwanye ụkpụrụ dị elu nke ogo, ọrụ ugbo na ọdịmma ha. Anyị kwenyere na ọdịmma anụmanụ na-enye anụ ka mma, ọ bụ ya mere eji edozi anụ a site na iji anụ ehi si n'ubi na-arụ ọrụ n'ụkpụrụ ndị a.
Jupụta na mpempe anụ anụ anụ na-acha uhie uhie na nnukwu anụ